स्कुले केटाकेटीको डिस्को लत | Nagarik News - Nepal Republic Media
२० भाद्र २०७३ २६ मिनेट पाठ
राजधानीका डिस्को र क्लबमा दिउँसो हुने पार्टीमा कलिला स्कुले केटाकेटीको भीड लाग्न थालेको छ । उनीहरूका लागि डिस्को लत नै भएको छ । अनि, रक्सी, चुरोट र गाँजाको कुलत सुरु गर्ने थलो पनि भएको छ यो । नशाको सुरमा हुने झैझगडा त छँदै छ । अभिभावक सचेत नहुने हो भने डिस्कोले यी कलिला किशोरकिशोरीलाई बिगार्ने पक्का छ । अनिल यादवले डिस्कोमा मग्न केटाकेटीका गतिविधि नजिकैबाट नियालेका छन् ।
शनिवार दिउँसो ३ बजे ।
काठमाडौँ, सुन्धारास्थित भेनिस क्लब (पुरानो बेबिलोन) वरिपरि बाक्लो चहलपहल थियो । क्लबको गेटअघि भित्र पस्नेको लाइन थियो । उमेरले अधिकांश १८ पार नगरेका स्कुले विद्यार्थी देखिन्थे । छेउमै प्रहरीको भ्यान थियो । सबै आ–आफ्नै धुनमा मस्त थिए । कोही चुरोटको सर्कोमा मग्न थिए त कोही क्लब छिर्न हतारिरहेका थिए । अधिकांश किशोरीका पहिरन छोटा–छोटा थिए । कतिका त टिसर्टमात्र देखिन्थे । कतिले अनुहारभरि ‘पियर्सिङ’ गरेका थिए । राजधानी दिउँसै रंगिन भएजस्तो दृश्य थियो । ‘गेटमा सोध्यो भने ‘‘म एट्टिन प्लस हुँ’ भन्नू, छिराइदिन्छ, आत्तिनुपर्दैन, म छु’, एक युवक आफ्नो साथीलाई सल्लाह दिँदै थिए ।
सुन्धाराको जस्तै दृश्य थियो, ठमेलको फ्रन्की फिट क्लब (पुरानो टीएनटी)मा पनि । कलिला उमेरका किशोरकिशोरी नाच्न भेला भइसकेका थिए । क्लब छिर्ने र निस्किने क्रम चलिरहेको थियो । त्यहाँ आउने सहभागीलाई हेर्दा लाग्थ्यो– ‘जति कम उमेर, त्यति छोटो पहिरन ।’ । त्यहीँनेर तीनजना युवतीहरूको एउटा समूहमा अर्की एक टुप्लुक्क आइपुगिन् । ‘ओए, आई एम सक्ड । तँ पनि आइस्, म त आउँदिनस् होला भनेको,’ हातमा चुरोट च्यापेकी युवती बोलिन् । ‘बल्लबल्ल ढाँटेर फुत्केको नि,’ निकै उत्साहसाथ अर्कीले भनिन्, ‘मम्सले त जानै दिनुभएको थिएन । रोश्नीको बर्थडे छ, पुगेर आइहाल्छु भनेर आ’नि । त्यसो भनेपछि पैसा पनि पाइयो, आउन पनि पाइयो । अब बबाल नाच्नुपर्छ, जाऊँ माथि ।’ त्यसपछि उनीहरू क्लबतिर उक्लिए ।
स्कुल पढ्दै गरेका आफ्ना छोराछोरी साथीको जन्मदिनमा जाने, घुम्न जाने या अन्य कुनै कारण देखाएर तपाईंकै अनुमतिमा घरबाट बाहिर निस्कँदैछन् भने तपाईं ढुक्क नहुनुस् । उनीहरूले तपाईंलाई ढाँटिरहेका पनि हुनसक्छन् । उनीहरू कुलतमा फसिरहेका पनि हुनसक्छन् । माथिका दुई दृ्श्य यसकै ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यतिबेला राजधानी शहरमा १८ वर्ष मुनिका र स्कुल पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूमा डिस्को धाउने ‘ट्रेन्ड’ बढिरहेको छ । उनीहरू डिस्कोमा पुगेर मादकपदार्थ सेवन गर्ने, झैभगडा गर्ने, खराब गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ ।
बिदाको सदुपयोग कि दुरुपयोग ?
राजधानीमा सञ्चालित अधिकांश डिस्को र क्लबमा शनिवार ‘डे पार्टी’ हुने गर्छ । विशेष गरी, ठमेल, दरबारमार्ग र सुन्धारा आसपास रहेका क्लबहरूमा यो ट्रेन्ड व्याप्त छ । ती पार्टीमा नै हो– अधिकांश १८ वर्ष मुनिका स्कुले विद्यार्थीहरू आउने । बिदाको सदुपयोग गर्न र रमाइलो गर्न उनीहरू त्यहाँ आउने गरेको इभेन्ट अर्गनाइजर एमएसभीका शीर्षक केसी बताउँछन् । ‘हामी विशेष गरी शनिवार र विभिन्न फेस्टिभलहरूको अवसरमा पार्टी अर्गनाइज गर्ने गर्छौं,’ उनले सुनाए ।
काठमाडौँ, चाबहिलकी अञ्जना लामालाई हप्ताको छ दिनसम्म शनिवार कहिले आउँछ भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ । ‘पढ्दा–पढ्दा बोर हुने क्या, कहिलेकाहीँ त यसो फ्रेस पनि हुनुप¥यो नि,’ शनिवार दिउँसो भेनिस क्लबमा भेटिएकी उनी निकै फुरुङ्ङ देखिन्थिन् । कति वर्ष पुग्नुभयो ? भनी सोध्दा उनले आँखा झिम्काउँदै भनिन्, ‘अरू बेला जति भए नि आज चाहिँ १९ वर्ष ।’ आफू अहिले कक्षा ९ मा पढिरहेको उनले खुलाएकी थिइन् । ग्रन्ज पाइन्ट र कानमा मुन्द्रा लगाएका आफूलाई विश्वास बताउने एक किशोर फ्रन्की फिट क्लबमा भेटिए । उमेरले उनी १५ पुगेछन् । यति सानो उमेरमा क्लब धाउँदा घरमा गाली खाइँदैन ? ‘हामीले चाहिँ रमाइलो गर्न किन नपाउने ?’ उनले बिन्दास पारामा भने, ‘जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । अझै सुड्डा–सुड्डीको कुरा सुनेर हुन्छ ? उनीहरू त पढ्–पढ् मात्र भन्छन् नि । यसो इन्जोय गर त कहाँ भन्छन् र ?’ विश्वास पनि बिदा हुनासाथ ‘डे पार्टी’ भन्दै डिस्को धाउँदा रहेछन् ।
संगत गुनाको फल भनेझैँ कलिला किशोरकिशोरी साथीभाइकै कारण डिस्को धाउने गर्छन् । ‘दिदीहरू डिस्को गएर आ’को भन्दा मलाई नि कस्तो होला भन्ने लाग्थ्यो,’ शनिवार ठमेलको तमास क्लबअगाडि भेटिएकी काठमाडौँ, गोंगबुकी सलिना कार्कीले सुनाइन्, ‘मसँगै पढ्ने साथीहरू पहिलेदेखि नै जाने गर्थे । उनीहरूको करले म पनि एक दिन आएँ । उनीहरूकै लहैलहैमा बिस्तारै बिस्तारै चुरोट, रक्सी सब खान थालियो । अहिले त क्लब धाउनु नशै भइसक्यो । बिदा भयो कि पार्टी र क्लब आइहालिन्छ ।’
कसले गर्छ आयोजना ?
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ– यसरी केटाकेटीलाई भेला पार्ने र पार्टी आयोजना गर्नेहरू क्लब स्वयं हुँदैनन् । सहभागीकै उमेरका केटाकेटी नै हुन्छन् । जस्तो– शनिवार सुन्धारास्थित भेनिसमा एमएसभीले पार्टी आयोजना गरेको थियो । एमएसभीका शीर्षक केसीले आफू प्लस टूको परीक्षा दिएर बसेको बताए । ‘दुई वर्ष भयो यसरी इभेन्ट गर्न थालेको,’ उनले भने , ‘हामीले त कम्पनी दर्ता गरेरै इभेन्ट गरिरहेका छौँ । यहाँ त फाइनान्स खुलेजसरी इभेन्ट अर्गनाइजरहरू देखापरेका छन् । तर, एक दर्जनले पनि दर्ता गरेका छैनन् ।’ उनी आफूलाई सिनियर ठान्छन् । ‘अहिले त १० कक्षामा पढ्ने भाइहरूले पनि इभेन्ट खोलेर पार्टी अर्गनाइज गरिरहेका छन् । उनीहरू चिनेजानेका साथीहरू ल्याउँछन्, पार्टी गर्छन् । अहिले त सबैलाई सजिलो भा’छ,’ उनले थप प्रस्ट पारे ।
राजधानीका ठाउँ–ठाउँमा पार्टी आयोजना गर्नेहरूको गु्रप हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरू विभिन्न ग्याङका नाममा पार्टी गर्छन् । ‘युनिटी हो क्या सबैभन्दा ठूलो कुरा,’ शीर्षक भन्छन्, ‘यहाँ त सबैको आ–आफ्नो एरिया हुन्छ । एउटा अर्गनाइजरको अर्कोसँग सहकार्य हुन्छ । कसले कहाँबाट मान्छे ल्याउने भन्ने पहिलै फिक्स्ड भइसकेको हुन्छ ।’
जोसमा होस हराउँछ
स्कुले विद्यार्थीहरू क्लब धाउनु समस्या होइन, त्यहाँ गइसकेपछि गर्ने गतिविधि र झगडा चाहिँ खास समस्या हो । गत साउन ८ गते काठमाडौँ, सोह्रखुट्टेमा भएको ग्याङ फाइट यसकै एक उदाहरण रहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका इन्स्पेक्टर उमेश लम्सालले बताए । त्यतिबेला एउटी युवतीको निहुँमा सुशान्त श्रेष्ठ र सौरभ श्रेष्ठको ग्याङबीच झगडा भएको थियो । जसकारण सुशान्त गम्भीर हुनेगरि कुटिएका थिए । उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । ‘सुशान्तको ग्याङ त्यतिबेला ठमेलको फ्रन्की फिटको डे पार्टीबाट निस्किएको रहेछ, सबै भर्खरका केटाकेटी थिए,’ इन्स्पेक्टर लम्सालले भने, ‘सबैजना नशामा लट्ठ थिए । आफ्नो प्रेमिकालाई ¥याक गरेको भनेर सौरभलाई कुट्न सोह्रखुट्टे चोकमा बसेका रहेछन् । बेलुका ६ बजे दुवैजनाको समूहबीच भनाभन भएछ । भनाभन हुँदाहुँदै हानाहान भएछ । त्यही क्रममा सुशान्त सडकमा ढलेछन् । उनीमाथि इँटा, रड र नकल प्रहार भएछ । १९–२० जनाको समूहबाट एकोहोरो कुटिएका उनको अन्ततः मृत्यु भयो ।’ यो घटनापछि प्रहरी ठमेलका क्लबहरूमा निगरानी बढाएको बताउँछ । ‘क्लबमा गएर केटाकेटीहरू मादकपदार्थ सेवन गर्ने र लागुऔषध लिने गरेको पाइयो,’ इन्स्पेक्टर लम्सालले भने, ‘त्यसपछि उत्तेजित हुने र झगडा गर्ने गरेको पाइयो । विशेष गरी डे पार्टीमा १८ वर्ष मुनिका केटाकेटीहरू सहभागी हुने गरेकाले हामी दिउँसोको पार्टीमा कडाइ गरिरहेका छौँ ।’
जति प्रचार, त्यति क्राउड
एउटी युवतीको तस्बिर राखिएको छ । अनि लेखिएको छ– वेस्टेड युथ प्रिजेन्ट्स ‘हिडन ल्यांग्वेज अफ सोल’ । मुख्य आकर्षणमा भनिएको छ– ट्याटू सो, क्रिस ब्राउनका गीतहरू, ड्रिंक्स, लाइटिङ, गेट लाउड एन्ड हाई आदि इत्यादि । भदौ १९, आइतवार अर्थात् तीजको अवसरमा आयोजना हुन लागेको पार्टीको पब्लिसिटी पोस्टर हो यो, जो फेसबुकमा हालिएको छ । दरबारमार्गको उडल्यान्ड क्लबमा भदौ २५ गते दिउँसो ३ बजेबाट रिदम इन्टरटेन्मेन्टले गर्न लागेको ‘ललिपप’ नामक पार्टीको प्रमोसन पनि फेसबुकमा भइरहेको छ । जहाँ ललिपप खाइरहेकी सेक्सी युवतीको तस्बिर देख्न सकिन्छ । आउँदो शनिवार भेनिसमा हुन लागेको दिउँसोको पार्टीको नाम चाहिँ ‘लक्की स्याटर्डे’ रहेछ । द लाइभ इभेन्ट्सले पार्टी आयोजना गर्दै रहेछ, जसको प्रमोसन अहिले फेसबुकमार्फत भइरहेको छ । यस्ता सबै इभेन्टमा स्कुले विद्यार्थीहरूकै भीडभाड ज्यादा हुन्छ ।
यतिबेला फेसबुक कलिला उमेरका केटाकेटीलाई पार्टीमा भिœयाउने इभेन्ट आयोजकहरूको प्रमुख माध्यम बनिरहेको छ । ‘फेसबुकमा जति धेरै प्रचार ग¥यो, त्यति नै क्राउड ल्याउन सकिन्छ,’ सुन्धारास्थित भेनिस क्लबमा भेटिएका रोयल नेटिभ इभेन्टका एक सदस्यले भने । ‘क्राउड बढाउने माध्यम भनेकै फेसबुक र लिंकअप हो । एउटा साथीले १० जनालाई ल्याउँछ , अर्कोले १०, त्यसरी नै क्राउड ल्याउने हो,’ उनले भने ।
प्रत्येक इभेन्टलाई सफल बनाउनका लागि आयोजकले प्रमोटर राखेका हुन्छन् । जसले फेसबुक र विभिन्न माध्यमबाट डिस्को पार्टीको प्रचार गर्छन् । ‘प्रमोट गरेबापत उनीहरूले प्रमोटर कार्ड पाउँछन्, त्यो लाएर पार्टी छिरेपछि त सानै बेग्लै हुन्छ,’ सोह्रखुट्टे एरिया हेर्ने सुप्रिम ग्याङका रितेशले भने, ‘मान्छे ल्याएबापत कमिसन पाउने डिल भएको छ भने त त्यो पनि पाउँछन् ।’
रातमा पनि उस्तै
धेरैजसो १८ वर्षमुनिका केटाकेटीहरू डे पार्टीमा भेटिन्छन् भन्दैमा रातमा उनीहरूको सहभागिता शून्य हुन्छ भन्ने होइन । ठमेलका फायर क्लब, दरबारमार्गको आई क्लब, उडल्यान्ड क्लब, कमलादीको टाइम्स क्लबलगायत दर्जनभन्दा बढी डिस्को र पबहरूमा राति पनि ‘अन्डरएज’का केटाकेटी देखापर्छन् । अधिकांश क्लब र पबहरूले उमेर या परिचयपत्र चेक नगरीकनै गेस्टलाई भित्र छिराउने गरेका छन् । यसमा सहमत देखिए, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलिया । ‘हामीले आईडी कार्ड हेरेर मात्र क्लबभित्र छिराउन सबैलाई पत्राचार गरेका हौँ, तर लागू हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने । रात्री पार्टीमा धेरैजसो १८ वर्षमुनिका या कलिला उमेरका किशोरकिशोरी आउने गरेको फायर क्लबमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । ‘स–साना फुच्चीहरूलाई लिएर केटाहरू क्लब आइरहेका हुन्छन्,’ नाम नलेखिदिने शर्तमा ठमेलका एक डिस्कोका म्यानेजरले भने, ‘उनीहरूलाई जबर्जस्ती रक्सी खुवाइरहेका हुन्छन्, नचाइरहेका हुन्छन् । जोडी आउँदा खर्च राम्रो गर्ने भएकाले हामी पनि रोक्न सक्दैनौँ । एउटा मनले यो गलत काम हो भन्ने लागिरहन्छ । तर, हामी त कर्मचारी न प¥यौँ । के गर्न सक्छौँ र ? पैसा हुनेको यहाँ जे पनि चल्छ ।’ प्रहरीले दिउँसो केही क्लबहरूमा अनुगमन गरे पनि रातमा सञ्चालन हुने डिस्कोहरूलाई खुल्ला छोडिदिएको ठमेलका व्यापारीहरू बताउँछन् । ‘त्यहाँ बच्चा आओस् कि वृद्ध, प्रहरीलाई मतलब छैन,’ ठमेलकै एक रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले भने, ‘उनीहरू क्लब र डिस्को बाहिर मात्र ड्युटी गर्छन्, भित्र सही या गलत जे भइरहेको होस्, आँखा चिम्लिदिन्छिन् ।’
क्राउड जम्मा पार्ने युवती
इभेन्ट आयोजना गर्नेहरूले ठूलो क्राउड जम्मा पार्नका लागि युवतीलाई लगाउने गरेका छन् । ‘पोस्टरमा केटीकै तस्बिर हुन्छ, टिकट भिडाउने पनि उनीहरू नै हुन्छन्,’ एक इभेन्ट अर्गनाइजरले भने, ‘तपाईं प्रत्येक दिउँसोको पार्टी हेर्न जानुस्, त्यहाँ भोलन्टियर र टिकट काउन्टरमा युवती नै हुन्छन् । टिकट र फेसबुकमा राखिने पोस्टरमा पनि युवतीको फोटो हुन्छ । फोन गरेर केटाहरूलाई फकाउने र पार्टीमा बोलाउने पनि युवती नै हुन्छन् । यो सब इभेन्ट आयोजना गर्नेहरूको ट्रिक हो ।’
दिउँसोको पार्टी गर्ने र किशोरकिशोरीलाई सहभागी गराउने अधिकांश इभेन्ट आयोजकहरूको उमेर पनि उनीहरूकै सरह हुने गरेको पाइएको छ । ‘भर्खरका केटाकेटी हुन्छन्, हामी इभेन्ट गर्छौं भन्दै आउँछन्,’ ठमेलका एक क्लब म्यानेजरले भने, ‘उनीहरूले त यसलाई कमाइ खाने धन्दा नै बनाइसके ।’ दिउँसो हुने पार्टीको टिकट दर सयदेखि तीन सय रुपियाँसम्म हुने गरेको इभेन्ट अर्गनाइजर शीर्षकले बताए । ‘टिकट बिक्री र डोर सेल (गेटमै हुने बिक्री) बाट आउने रकम नै हाम्रो आम्दानी हो । भित्र क्लबमा कसैले किनेर खायो भने त्यो चाहिँ क्लबधनीकै हुन्छ,’ उनले भने ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को आचारसंहितामा १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरकिशोरीलाई क्लबभित्र पस्न नदिनू भन्ने छ । तर, यो आचारसंहिता व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन । सोह्रखुट्टेको घटना र लगातारको गुनासोपछि ठमेल प्रहरीले सक्रियता भने बढाएको छ । गत साउन २२ गते प्रहरीले फ्रन्की फिट क्लबका सञ्चालक बाबुराज खड्कालाई त सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा नै चलायो । ‘पहिलोपल्ट १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्लबमा भेटेपछि फेरि यस्तो नहोस् भनेर चेतावनी दिएका थियौँ,’ इन्स्पेक्टर उमेश लम्सालले भने, ‘फेरि पनि दोहोरिएको पाएपछि पक्राउ गरेका थियौँ । त्यसपछि भदौ ५ गतेसम्म थुनामा राखेर छ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा ग¥यौँ ।’ लम्साल अन्डरएजलाई नियन्त्रण गर्न सक्रियता बढाएको बताउँछन् । ‘कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पनि ठमेलको तमास क्लबमा हुन लागेको दुई पार्टी अन्डरएजकै कारण बन्द गरिदियौँ,’ उनले भने , ‘समाज गलत दिशातर्फ गइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । त्यसैले बालबालिका बिग्रनु हुन्न भनेर क्लबहरूमा कडाइ गरिरहेका छौँ ।’
‘अन्डरएज’का कारण विभिन्न घटना हुन थालेपछि प्रहरीले कडाइ गर्न थालेको इभेन्ट आयोजकहरू पनि स्विकार्छन् । ‘तर, यो सब ‘बार्गेनिङ’ नमिलेर हो,’ एक इभेन्ट अर्गनाइजरले भने, ‘सेटिङ मिलाएपछि उनीहरू पनि चुप हुन्छन् ।’
इभेन्ट आयोजकहरूले क्लबसँगको मिलेमतोमा त्यहाँ आउने किशोरकिशोरीलाई ठग्ने गरेको खबर समेत पाइएको छ । प्रहरीले अन्डरएजमा कडाइ गरेपछि आयोजकहरूले पनि ‘ट्रिक’ लाउन थालेका रहेछन् । कस्तो ट्रिक ? ठमेलमा भेटिएका एक इभेन्ट आयोजकले भने, ‘१८ वर्षमुनिका कलिला केटाकेटी आए पनि पैसा लिएर भित्र छिराउँछौँ । उनीहरू पाँच–दश मिनेट नाच्छन् । त्यसपछि प्रहरी आउँदै छ भनेर उनीहरूलाई बाहिर निकाल्छौँ । त्यसो गर्दा पैसा पनि आयो, प्रहरीबाट पनि बचियो ।’
यता सुन्धाराको क्लबमा डे पार्टीको विषयमा महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका डीएसपी विनोद घिमिरे जानकार छन् । ‘विशेष गरी शनिवार दिउँसो यस्तो हुने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘स्कुलको युनिफर्म नै लगाएर उनीहरू आउँदैनन् । त्यसैले हामीले कारबाही गरेका छैनौँ । ठूलठूला केसमा व्यस्त हुने भएकाले यसलाई मिसनका रूपमा हामीले लगेका छैनौँ ।’
सुन्धारास्थित भेनिस क्लबको दिउँसोको पार्टीमा किशोरकिशोरीका पहिरन र हर्कतले आसपासका समेत आजित छन् । ‘यहाँ त देखिनसक्नु हुन्छ,’ सुन्धारामा चियापसल चलाइरहेकी एक महिलाले भनिन्, ‘ओठ निचोर्दा दूध आउला जस्ता केटाकेटी रमिता देखाउँछन् । यो देखेर म त मेरो छोरालाई पसलमै बोलाउँदिनँ ।’
यता ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलिया पैसा कमाउने नाममा १८ वर्षमुनिकालाई डिस्कोमा पसाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘हामीले त छिर्न नदिनू भनेर आचारसंहितै बनाएका छौँ,’ उनले भने,‘ तर पनि लुकिछिपी केही क्लबले यस्तो गर्ने गरेको पाइएको छ ।’
यसरी क्लबमा धाउने किशोरकिशोरीका अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरी कुलतमा फसिरहेको थाहा हुँदैन । घरमा अभिभावकलाई ढाँटेर उनीहरू क्लब आउने गरेको इभेन्ट आयोजकहरू नै बताउँछन् । एक महिनाअघि काठमाडौँ, वसन्तपुरबाट महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाको टोलीले चुरोट र छ्याङ खाइरहेका अवस्थामा ४२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसमा ३० जना केटा र १३ जना केटी थिए । ‘सबै स्कुले विद्यार्थी थिए, हामीले अभिभावक बोलाएर सम्झाएर छाड्यौँ,’ डीएसपी विनोद घिमिरेले भने, ‘चुरोट, छ्याङ र डिस्को त अहिले केटाकेटीको फेसन नै भइसकेछ ।’ घिमिरे अभिभावकको लापरवाहीले गर्दा यस्तो ट्रेन्ड देखापरेको बताउँछन् । ‘आफ्ना छोरा–छोरी कहाँ जाँदै छन् र के गर्दै छन् भन्नेमा बाउआमाले पनि ध्यान राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुलिसले कति दिनसम्म रोकेर हुन्छ र ? सर्वप्रथम त अभिभावक नै जिम्मेवार हुनुप¥यो ।’
प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ १२:०३ सोमबार